हरिशरण न्यौपाने, खप्तड, ११ जेठ । २०७५ वैशाख ३० गते सोसाईटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो–नेपाल) सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धनको शिलशिलामा त्यसक्षेत्र र भारतको उत्तराखण्डअन्तर्गत पर्ने विभिन्न गन्तव्यको भ्रमणमा निस्कियो । सोट्टो नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष यमबहादुर खड्को नेतृत्वमा दर्जनबढी पर्यटन व्यवसायीहरु, राजनीतिकर्मी, पर्यटन अभियन्ता, पर्यटन पत्रकारहरु लगायतको प्रतिनिधिहरुले त्यस क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो । भारतको उत्तराखण्डअन्तर्गत गर्ने आधा दर्जन बढी गन्तव्य र नेपालको सुदूरपश्चिमका दर्जनबढी गन्तव्यमा पुगेर उक्त समूहले त्यहाँका भर्जिन गन्तव्यहरुको अध्ययन अवलोकन गरेर अब पर्यटन प्याकेज नै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यहि पर्यटन प्रवद्र्धनको अध्ययनकाक्रममा सुदूरपश्चिमका विभिन्न गन्तव्य हुँदै एउटै यात्रामा खप्तड पुगेका एघार जनाको आँखाले सुदूरपश्चिमलाई कस्तो देख्यो ?
पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने खप्तड एकदमै सुन्दर र भर्जिन ठाउँ हो
यमबहादुर खड्का, निवर्तमान अध्यक्ष, सोट्टो नेपाल
हामीले यसअघि लुम्बिनी देखि स्वर्गद्धारी र राराबास देखि रारासम्मको जुन अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍याै‌ं, त्यही सफलताबाट उत्साहित भएर सात नम्बर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने शुक्लाफाँटादेखि खप्तडसम्म त्यहि खालको अभियान संचालन गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेका थियौं । अभियानकै क्रममा शुक्लाफाँटा, नालापानी, अमरगढी हुँदै खप्तड पुग्यौं । यसबीचमा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाका अन्य गन्तव्यहरुसम्म पुग्यौं । यहाँको मुख्य आकर्षकीय गन्तव्य खप्तड हो । तर खप्तड जान त्यति सहज छैन भन्ने हामीले बुझेका थियौं । तापनि स्थानीय व्यवसायीलाई घच्घच्याउनु पर्ने मुख्य उदेश्य बोकेर हामीले यहाँको यात्रा तय गरेका हौं । मैले सबै दृष्यहरुलाई नियाल्दा खप्तड जाँदा बझाङको बाटो सहज छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । सुदूरपश्चिमका अभियन्ताकाअनुसार खपतड पुग्ने ५ वटा बाटोहरु छन्, अब उहाँहरुको सल्लाहअनुसार जुन बाटोबाट सहज हुन्छ त्यहाँबाट हामीले पर्यटकलाई त्यहाँ पठाउने काम गर्नेछौं ।
हामीले छिट्टै यसको पर्यटन प्याकेज सार्वजनिक गर्नेछौं । विभिन्न वेभसाइटहरुमा हाम्रा प्याकेजहरु राख्नेछौं । हामी त्यसलाई उचित मूल्य तय गरेर बिक्रीमा राख्नेछौं । हामीले दिने सेवा, सुबिधाअनुसारको प्याकेजिङ लागत जोडिनेछ । हामी यो भन्छौं कि पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने खप्तड एकदमै सुन्दर र भर्जिन ठाउँ हो । यहाँ आउने पर्यटकलाई आयातित सामाग्रीहरुले स्वागत गर्नु भन्दा पनि स्थानीय खाद्यान्न देखि अन्य वस्तुले स्वागतसत्कार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम पर्यटकीय सम्भावनाका हकमा प्रचुर छ, गर्नपर्ने धेरै छ
उदय भट्टराई, प्रबन्धक, नेपाल पर्यटन बोर्ड
सुदूरपश्चिम एउटा भर्जिन गन्तव्य हो । अधिकाँश मानिसहरुले यहाँका गन्तव्य देखेका छैनन् । सम्पदाका हिसाबले यो निकै धनी छ, समृद्ध छ । त्यै भएर सुदूरपश्चिम गएर एकपटक हेर्नुपर्छ । नितान्त नौलो किसिमको अनुभव पाउन सकिन्छ भनेर प्रचार गर्न सकिन्छ ।
हामी गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने संस्था हौं । नेपालमा पर्यटनका केहि सिमित गन्तव्य र गतिबिधि मात्रै छैनन् । पर्यटनका स्रोतका हिसाबले सुदूरपश्चिम निकै समृद्ध लाग्यो । तर स्रोतलाई बजारसम्म लगेर जोडिदिने काम नभएको देखिन्छ । पर्यटकलाई चाहिने र पर्यटनजन्य सेवाहरुमा लगानी गर्न व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने र सम्भावना बोकेका मुख्य स्थानहरुमा पूर्वाधार पहुँचमा कमि भएको देखिन्छ ।
यात्राकोक्रममा भन्नुपर्छ मलाई यहाँको मौलिकताले निकै आकर्षित गर्यो । यहाँको जुन प्राकृतिक पक्षका साथै धेरै चिज गर्न र हेर्न बाँकी पनि छ । सम्भावनाका हकमा प्रचुर छ, गर्नपर्ने धेरै छ ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेकाे पर्यटकको जातजाती, भाषा, वर्ण केहिपनि हुँदैन । सर्वप्रथम हामीले गर्नुपर्ने कामहरु स्थानीय तहले र पर्यटन क्षेत्रले कुन थरीका पर्यटक, कहाँ–कहाँ, कुन भूगोलका, कस्ता किसिमका उदेश्य बोकेका, कति खर्च गर्नसक्ने लगायत पाँच/छ वटा आधारभुत मान्यताहरुलाई यकिन गरेर के-कस्ता सेवाहरुको विकास गर्नुपर्छ, पहुँच र कहाँ बाटो राखिदिने, कस्ता किसिमका पर्यटकीय गतिबिधि सिर्जना गरिदिने आदी/इत्यादी कुराको निर्णय लिनुपर्छ ।
हामीलाई यहाँको वस्तुगत विष्लेषण गर्ने मौका मिल्यो । पूर्वाधारको अवस्था के छ भन्ने ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको छ । यो क्षेत्रको मानव शंसाधन विकास, योजनाबद्ध विकास, स्थानीय समुदायलाई बजारसम्म कसरी जोड्ने, पर्यटनमार्फत स्थानीयको क्षमता कसरी बढाउने र बढीभन्दा बढी स्थानीयलाई पर्यटनजन्य सेवा सुबिधामा जोड्ने कार्य जुन साना लगानीमार्फत पनि सम्भव छन् भन्ने लागेको छ । मैले नेपाल पर्यटन बोर्डमा त्यस किसिमको सुझाव प्रस्तुत गर्नेछु ।
सुदूरपश्चिमको मुख्य गन्तव्य खप्तडमा धार्मिक, अध्यात्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैको एउटा पाटोकोरुपमा ध्यान, मेडिटेसनजस्ता पर्यटकीय गतिबिधिहरु हुनसक्छ । अहिलेकै पूर्बाधारले पनि त्यस्ता गतिबिधि गर्न सकिन्छ । तरपनि पर्यटकलाई खाने, बस्ने लगायत न्यूनतम सेवाहरु भने दिनैपर्छ । यसमा विकास निर्माण, पूर्वाधार तयार गर्न प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह लगायतले पर्यटनलाई एक महत्वपूर्ण पक्षकोरुपमा लिनुपर्छ । त्यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले सहकार्य गर्नेछ, पछि हट्दैन ।
खप्तडको जुन दृष्य देखियो त्यो दृष्य साँच्चै स्वर्गकै टुक्रा जस्तो छ
नारायण पराजुली, महासचिव, सोट्टो नेपाल
सुदूरपश्चिम घुम्न असाध्यै रमाइलो छ । धार्मिक पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकियोस भनेर हामी भारतको हरिद्धार, ऋषिकेश, देहरादुन पनि गयौं र सुदूरपश्चिमको खप्तड पदयात्रा गर्यौं । पदयात्राकाक्रममा खप्तडको जुन दृष्य देखियो त्यो दृष्य साँच्चै भन्ने हो भने स्वर्गकै टुक्रा जस्तो लाग्छ ।
बाटोको अप्ठ्यारा कठिनाई त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तापनि खप्तडको दृष्यले बाटोमा भोग्नुपरेका कठिनाई सबै बिर्साईदियो । मेरो सबैलाई सझुाव छ जन्मेपछि सबैले एकचोटी खप्तडको मनोरम दृष्य र आसपासका धार्मिक गन्तव्यहरुमा पुग्नैपर्छ । भर्जिन सुदूरपश्चिम भ्रमण गरौं भन्न चाहन्छु ।
निराश भएकालाई नयाँ जीवन जीउने ज्ञान दिने भूमि सुदूरपश्चिममा छ
महेश भट्टराई, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठन प्रदेश ७
सुदूरपश्चिम पर्यटनको एक भर्जिन गन्तव्य हो । पर्यटन व्यवसायीहरु भर्खर ब्यूँझेजस्तो भएका छन् । यसलाई पर्यटनकोक्षेत्रमा दौडाउन पर्ने र सरकारको ध्यान पूर्वाधार विकासमा जानुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि निजी क्षेत्रका मानिसहरुले त्यहाँ आफैं व्यवसायीक क्रियाकलाप गर्न थाल्नेछन् ।
नेपालका अधिकाँश पर्यटकीय गन्तव्य पुराना भईसकेका छन् । मानिसहरु नयाँ चिज चाहन्छन् । नयाँ चिजको खोजी गर्न चाहन्छन् । सुदूरपश्चिममा त्यस्ता नयाँ भर्जिन ठाउँहरु शुक्लाफाँटा, अमरगढी, खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, सुर्मा सरोवर, अपि हिमाल, शैपाल हिमाल अादी छन् । धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहाँसिक, प्राकृतिक थुप्रै चिजहरु छन् । त्यसैले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि धेरै महत्वपूर्ण गन्तव्यहरु यहाँ छन् । तर पर्यटकका पूर्वाधार र पर्यटककाबारेमा चेतनाको कमि छ ।
मैले भन्नुपर्दा अहिलेकै पूर्वाधारमा पनि अध्ययन, अवलोकन, ध्यान, योगा गर्ने, माइन्ड फ्रेस गर्ने पर्यटकका लागि खप्तड एकदमै उत्कृष्ट गन्तव्य हो, जानुस् भन्छु । तनाव डिप्रेशन भएका लागि जानुस्, सुन्दर छ । धर्तीका स्वर्गका टुक्रा जस्ता गन्तव्यहरु छन् । ती गन्तव्य जीवन देखि आतिएका, निराश भएकालाई नयाँ जीवन बन्न सक्छ, यस्तो ज्ञान दिने भूमि सुदूरपश्चिममा छ भन्न चाहन्छु ।
कष्ट सहेरै मनोरम खप्तडको दृष्य हेर्न पुग्छु भन्नेलाई मात्र जानुस भन्न सक्छुु
मानबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष, सोट्टो नेपाल
सुदूरपश्चिम अहिलेको भर्जिन पर्यटकीय गन्तव्य हो । तर यसको प्रवद्र्धन प्रचार प्रसार गर्न नसकिएको अवस्था छ । राज्य र व्यवसायीहरु मिलेर संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।
विशेषतः खप्तड, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, रामारोशन र अरु धेरै उत्कृष्ट गन्तव्यहरु यहाँ छन् । ती सबै गन्तव्यको स्वदेश र विदेशमा प्रचारप्रसार गर्नु आवश्यक छ । म व्यवसायी भएको हिसाबले पर्यटकलाई सुदूरपश्चिम जानैपर्ने गन्तव्य हो भन्दछु ।
तर सबैभन्दा पहिले यहाँको पर्यटकीय पूर्वाधार तयार नभएसम्म पर्यटकलाई पठाउन सकिने अवस्था छैन । एड्भेन्चर टूर गर्न सकिने पर्यटक आउँदा हुन्छ । पूर्वाधार बन्दा मात्र जानसकिन्छ भनेर अरुलाई सुझाव दिन सकिन्छ । जोखिम उठाएर यात्रा गर्नु ठिक हुन्न भन्न चाहन्छु ।
कष्ट गरेरै मनोरम दृष्य हेर्न पुग्छु भन्नेलाई मात्र अहिले तत्काल खप्तड जान सकिन्छ भन्न सक्छु । पर्यटनसँग सम्बन्धी सबै सरोकार वालाले पर्यटकलाई त्यहाँ सहजरुपमा पुर्याउनेतर्फ ध्यान दिनसके यहाँ पर्यटकको ओईरो लाग्नेछ । सूदूरपश्चिमको भविष्य उज्वल छ ।
पूर्वाधार तयार नगरीकन पर्यटकलाई खप्तड पठाउन ठिक जस्तो मलाई लाग्दैन
भुवन महर्जन, ट्राभल व्यवसायी
सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरु घुम्न त साह्रै रामाईलो हो । पहिले घुम्न जानुभन्दा अगाडि खप्तड त एकदमै राम्रो भन्ने लागेको थियो । त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो लागेन । त्यहाँ कुनै पूर्वाधार एवं संरचनाको विकास नै भएको रहेनछ । बाटोहरु नै बनेको छैन । जान त गएँ तर धेरै कठिन छ । खप्तडको पाटनमा पुग्दा त साह्रै रमाइलो हुन्छ । तर फर्किंदा बाटोमा कष्ट भएकोले ट्राभल व्यवसायीले तत्काल त्यो ठाउँमा जान र व्यापार गर्न कठिन छ ।
खप्तड साह्रै सुन्दर छ । तर पर्यटकीय पूर्वाधार तयार भएमा मात्र जान सकिन्छ । एकदम चिसो, खुल्ला पाटन(घाँसेमैदान) त रमाईलो हो । हामी त दुःख कष्ट गरेर फर्कियौं । अरुले पनि त्यस्तो दुःखकष्ट गरेर फर्किनु राम्रो हुँदैन । हामीले पर्यटकलाई यो तरिकाले जाउ भनेर भन्नुपर्छ, बुझाएर पठाउनुपर्छ । अहिले पर्यटकलाई बुझाएर पठाउने अवस्था नै छैन । कष्ट भएपनि सुन्दर ठाउँ हेर्नलाई जान्छु भन्नेलाई मात्र पठाउन सकिन्छ ।
पहिले पूर्वाधार तयार नभइकन पर्यटकलाई पठाउन ठिक जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँको गन्तव्यहरुको भविष्य त छ तर अहिले त्यहाँ पहिले त पूर्वाधार नै तयार गर्नुपर्दछ ।
व्यवस्थापन गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम सबैको आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ
किशोर खड्का, सचिव, नेपाल पर्वतारोहण संघ शैपाल हिमाल शाखा
हामीले छिमेकी मुलुकका पर्यटकीय गन्तव्यसँग तुलना गर्दा सुदूरपश्चिमले धेरै सम्भावना बोकेको छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने कुनैपनि ठाउँको पर्यटकीय गन्तव्य भन्दा यहाँको गन्तव्यमा कुनै कमि छैन । यसलाई आकर्षक गन्तव्य बनाउन सक्छौं ।
दुई कुरा गतिबिधि केन्द्रित पर्यटन र प्राकृतिक केन्द्रित पर्यटन जहाँ पदयात्रा र दृष्यहरु हेर्नका लागि मानिसहरु पुग्छन् । प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न यहाँ संरचना र पूर्वाधारको कमि लाग्छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय मुटु खप्तडलाई मानिन्छ । त्यहाँ जाने पाहुनालाई राम्रोसँग सेवा, सुविधा दिने अवस्था अहिले छैन । व्यवसायिक ढंगले हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं ।
गतिबिधि केन्द्रित पर्यटन हेर्ने हो भने कर्णाली चिसापानीमा र्याफ्टिङ गराउन सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी अरु साँस्कृतिक गतिबिधिहरु छन् । केहि शहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा क्रियाशिल र व्यवसायीक बनाउन सकेका छैनौं ।
पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । राज्यले वातावरण तयार गरिदिनुपर्‍याे। खप्तडमा निजीक्षेत्र जान चाहन्छ । त्यहाँ संरचना बनाउन दिनुपर्‍याे । व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न करमा छुट र अनुदान लगायत प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ । केहि समयपछि यो क्षेत्रको पर्यटन आफैं विकास हुनसक्छ।
पर्यटकलाई तान्नसक्ने क्षमता भएको खप्तड दुनियाँमै त्यति राम्रो गन्तव्य अन्त कँहि छैन
इन्दिरा गौत्तम, पर्यटन व्यवसायी
सूदूरपश्चिमको खप्तड पुग्दा साह्रै रमाईलो छ । तर जान त्यति सहज छैन । त्यहाँ पुग्दाखेरी मनमा आनन्द र धार्मिक हिसाबले भनिन्छ नि स्वर्ग जाने भनेजस्तै अनुभव हुन्छ ।
धार्मिक हिसाबले पनि सुदूरपश्चिममा धेरै महत्वपूर्ण भूमि रहेछन् । खप्तडमै त्रिवेणीधाम, सहस्रलिङ्ग लगायत धार्मिक गन्तव्य छ । अन्य धेरै जिल्लाहरुमा धार्मिक गन्तव्यहरु छन् । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तडमा ताल पनि छ । २२ वटा पाटन(घाँसे मैदान) सँगै थुम्का थुम्का परेका जंगलहरु एकदमै आकर्षक छन् । जता हेर्‍याे त्यतै हरियाली एकदमै आनन्ददायक छ । प्राकृतिक हिसाबले एकदमै राम्रो छ । पर्यटकलाई तान्नसक्ने क्षमता भएको खप्तड दुनियाँमै त्यति राम्रो गन्तव्य अन्त कँहि छैन । तर जानलाई त्यति सहज छैन ।
सम्बन्धित निकायले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिएर सबै पर्यटकलाई सहज र सजिलो तरिकाले पुर्‍याउन सक्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ । मानिसहरु पैसा खर्च गरेर त्यहाँ जान चाहन्छन् । उनीहरुलाई सुबिधा त दिनुपर्यो नि ! खान, बस्न, बाटोको सुबिधा, सरसफाईमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनसकेमात्र यहाँको पर्यटन फस्टाउनेछ ।
सुदूरपश्चिम साह्रै सुन्दर छ, तर सबैभन्दा पहिले पर्यटक पुर्‍याउनसक्ने पूर्वाधार बन्नैपर्छ
सुशिल नेपाल, पर्यटन व्यवसायी
धेरै रमाईलो छ । सुदूरपश्चिम सुन्दर छ । त्यसमा खप्तड क्षेत्र त धेरै राम्रो छ । तर बाटोघाटोको कारणले गर्दा रमाईलोको साथसाथै कष्ट पनि छ ।
मेरो अरुलाई सुझाव भनेको कष्ट भएपनि नेपालको रमणीय ठाउँ घुम्नुपर्छ भन्ने रहन्छ । खप्तड जाने हो भने हिंड्नसक्ने पर्यटक मात्र जान सक्छन् । होइनभने लरतरो मान्छे जान सक्दैन । मुख्यत खप्तड जाने र आउने सहज बाटो बनाउनुपर्‍याे । बाटो त्यति राम्रो छैन । लामो बाटो हिंड्नुपर्छ । विभिन्न रुटका बाटोमा १६/१७ घण्टासम्म पनि हिंड्नुपर्ने अवस्था देख्यौं । सके बाटोलाई छोट्याउने कोशिस गर्नुपर्‍याे, यदि सकिन्न भने बीचमा बास बसेर जानसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो । सुदूरपश्चिमका सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पुग्नका लागि सबैभन्दा पहिले पर्यटकलाई त्यहाँसम्म सहजरुपमा पुग्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनैपर्छ ।
सुदूपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यको भविष्य छ
विन्दु प्रधान, पर्यटन व्यवसायी
सुदूरपश्चिम घुम्न त साह्रै रमाईलो छ । सँगसँगै यहाँ मन्दिरहरु र शक्तिपिठहरुको दर्शन गर्‍याै‌ं । धार्मिक हिसाबले देहरादुन, ऋषिकेश लगायतका भारतका धार्मिक स्थलहरु पनि घुम्यौं । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका अनेकौं स्थानमा रहेका धार्मिक स्थानमा रमाईलो र यहाँको प्राकृतिक दृष्यले मनमा शान्तिको अनुभव भयो । खप्तडको प्रवद्र्धनको लागि गएका थियौं । स्थान त साह्रै सुन्दर छ ।
तर पर्यटक पुर्‍याउन अहिलेका पूर्वाधारले पुग्दैन । सजिलो बाटोहरुबाट पर्यटकलाई घुमाउने र खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी बझाङबाट जाँदा घोडाको पनि व्यवस्था थियो । तर अछामतर्फबाट फर्किदा साह्रै गाह्रो भयो । पर्यटकलाई त्यो अप्ठेरो बाटो पठाउन सकिन्न । जुन बाटो सहज छ त्यताबाट पर्यटक पठाउने कार्य गर्नुपर्छ । पदयात्रा कठिन त हुन्छ । कठिन भएपनि धेरै रमाइलो यात्रा थियो । स्थानीय निकायले पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण, खानपानको व्यवस्था, सरसफाईदेखि सुरक्षाको प्रबन्धमा ध्यान दिनुपर्‍याे । यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यको भविष्य छ ।
खप्तड पुगेपछि जिउँदै स्वर्ग पुगेको अनुभव हुन्छ
जनार्दन अर्याल, फोटो पत्रकार
नेपाल अधिकाँश पहाडले भरिएको देश हो । सुदूरपश्चिम पनि त्यसबाट अछुतो छैन । यो घुमाई जीवनको अविष्मरणीय क्षण बन्यो । यात्राकाक्रममा गाह्रो अप्ठेरो त भयो नै तर यहाँका रमणीय पहाड घुम्दा धेरै आनन्द लिएँ । एकदमै रमाईलो भयो ।
सुदूरपश्चिम जानुपर्छ, त्यसमा पनि खप्तड एकचोटी पुग्नैपर्छ भन्दछु। खप्तड पुगेपछि जिउँदै स्वर्ग पुगेको अनुभव हुन्छ । बाटोमा पर्ने जति धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदाहरु साह्रै हेर्न लायक छन् । केहि नभएपनि खप्तड जानैपर्छ, पुग्नैपर्छ भनेर अरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु ।
उकालो लाग्दै नेप्से परिसूचक
राजश्व चुहावटको उच्च जोखिम क्षेत्र खोज्दै सरकार, कहाँ कस्तो छ अवस्था ?
अर्थमन्त्रीलाई बाबुरामले भने- सञ्जीवनी होइन, विन्ध्याचल नै ल्याए
एजेन्सी, ५ जेठ । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले खेलाडी छान्ने स्वतन्त्रता आफूमा हुनुपर्ने बताएका...